Basic_Joomla___Google_Apps_www.nyinaymin.org by peter kyaw - issuu
သင် ဟာwebsite တ စ် ခု ကိ ကောင်ုး ကောင်းရေး တတ် တဲ သူ့  တစ် ယောက် ဆိ ရင်ု
ဒီ စာ အု ပ် ဟာသ င် အတွ့က် ဘာ မှ မဟုတ် ပါ ဘူး..
ဒီ စာ အု ပ် ဟာ .. website တ စ် ခု ကိ တ စ်ုခါ မှ မရေး ဖူးသေးသော.. joomla နဲ လ ည့်းဘာအတွေ့  အြ ကုံမှ မရှ သေိာ domain တို့hosting တိ့ုgoogle apps သံုး တာတိ့ုဘာ မှ မသိ သောသူ များ အတွ က်ြ ဖစ် ပါ တယ်။ Absolute beginner များ အတွ က် သာ ရည်ရွ ယ် ပါ တယ် ။သ င် ဘာမှ မသိထားလေ လေ ဒီ စာအု ပ် က သင် အတွ့ က်ြ ဖစ် လေ လေ ပါ ပဲ ။များ များ သိ လေ လေ သ င် ဖတ်ဖိ မလု့ုလေလေြိဖစ် ပါ လိ မ် မယ့် ။
beginner များ အတွ က် အြေ ခခံ တွေ ကိုscreen shots များ စွာသံြးု ပီးတ စ် ဆ င် ချ့င်းစီ ရှ င်ြး ပသွား မြှာ ဖစ် ပါ တယ် ။ သင် ဟာ ဘာမှ သေချာမသိတဲ သူ့  တ စ် ယောက်လိ ပဲ့ုကျ န်ွှတောယ်ူဆပါ တယ် ။ ဒီ စာ အု ပ် ကိ အစအဆုံးလေ့ုလာြ ပီးကိ ယ်ုတိ င်ုလု ပ်ြ က ည်ြ့ပီးတဲ့  အခါသင် ဟာမဖတ်သေးခင် က ထက်တော့ နဲ နဲ ပိ သိုလာ ပါ လိ မ် မယ့် ။
သင် self study လု ပ် နေရင် တောတော်ြ်ကာ နိ င်ုတာတွေဟာ.. ဒီ စာ အု ပ် ကိ ဖတ်ု လိ က်ုရင် လျှင်ြ မန် စွာနဲ့ 
လု ပ် တတ် လာပါ လိ မ် မယ့် ။တစ် စံ တစ်ုရာတော့ အကျိုးရှ မယ်ိ လိ မှေ့ျုာ် လင် ပါ့တ ယ် ဗျာ။ကဲစြ က ရအော င် ဗျာ… 
Joomlaြ ဖင့်website ရေး ရန် အတွ က် အြေ ခခံြ ပင် ဆ င် မှု များ joomla ဆိ တာအခုအချ န်ိမှာတော့ ပေါ် ပျူလာ အြ ဖစ် ဆံုး နဲ့  အကောင်းဆံးcontent managementု
system(CMS) တစ် ခုြ ဖစ် ပါ တယ် ။ဆိလိုတာက သ င်ုအနေနဲ့ coding တွေprogramming
တွေ ကိ ထူုး ထူးထွေ ထွေသိ ဖိ မလို့အပ်ုပဲ နဲ့  လွ ယ် လွ ယ် ကူ ကူ ပဲ website တွေကိ ဖန်ုတီးနိ င်ုစေတာပါ ။
ကျ န်ွှတောတိ့်ုjoomla ကိ စလေု့လာ တော့ မယ်ဆိ ရင်ုlocalhost မှာသော် လ ည်းကောင်းremote host မှာသောလည်း ကောင်းလေ့ လာ လိ ရပါ့ုတ ယ် …
localhost ဆိတာုက တော့ ကျ န်ွှတော် တိ ရဲ့ု့ ကွ န် ပျူတာထဲ မှာပဲ web server နဲ့  database ကိထာုး တဲ ပံ့  စုံပါlocal
network က ကွန် ပျူတာ တ စ် လံုး မှာထာြး ပီးသံုးလု လည့်ိး ရပါ တ ယ် လိ အပ်ုတဲ့  software ကိ သွုင်းထားြ ပီြး ပီ ဆိ ရင်ု
လွ ယ် လွ ယ် ကူ ကူ ပဲ ကိ ယ်ုစက့်  ထဲ မှာပဲ local စမ်းသံုး လိ ရပါ့ုတ ယ် ။remote host ဆိ တာကတောု့Internet မှာရှ တဲိ့ web hosting တစ် ခု ခု မှာတ င်ြ ပီးသံုး တာကိြေုပာတာပါ ။
အခု ကျ န်ွှတော် တိ့ုအရင် ဆံးlocalhost မှုာအသံုးြ ပု ပံ ကို အရင်ြ က ည် ရအော့င် ပါ ။localhost မှာသံုးဖိ အတွု့က်
လိ အပ်ုတဲ့  software တွေ အား လံုး ကိုပေါ င်းစုြ ပီးထ ည် ထာ့း တဲ့  package software တွေရှ ပိါတယ်။အဲ ဒီ software တွေ ကိ သုံြးု ပီးweb server နဲ database ကိ့  ကုယ်ိစက့်  ထဲ မှာပဲ ရရှ မြှိာ ဖစ် ပါ တယ် ။
အဲ ဒီ software တွေထဲ မှာwindows အတွ က် ထ င် ရှား တာတွေကတော့ WAMP နဲ့  XAMPP တိပဲ့ြု ဖစ်ြ ကပါ တ ယ် ။ သူ ထဲ့  မှာapache, mysql, php စတဲ့ joomla run နိ င်ုဖိ အတွု့က် လိ အပ်ုတာ တွေအားလံုး ပါ ၀င် တာြ ဖစ် ပါ တ ယ် ။ ကျ န်ွှတောတိ့်ုအခု XAMPP ကိပဲုရွေြး ပီးတော့ လေ့ လြာ က ပါ မယ် ။
၁။http://www.apachefriends.org/en/xampp.html ကိသွုာြး ပီးတော့ ကိ ယ်ုရဲ့့ windows version နဲ့  ကိ က်ုညီ တဲ့  xampp installer ကိ ဒေါုင်းလု ပ် ဆွ ပဲါ။40 MB ခန် ရှ့  ပိါတယ်။
၂။installer ကို run လုက်ိပါ ။language မှာEnglish ကိရွေုးြ ပီးတော့ next နှ စ် ခါ နှ ပ်ိလိ က်ုရင် အော က် ကပံ ကိုရောက်ု ပါ မယ် ။
၃။apache နဲ့  mysql ကိပါုservice အနေနဲ့  check လုပ် ပေးြ ပီးinstall ကိနှုပ်ိပါ ။
၄။install လု ပ် တာြ ပီးသွား ရင် တော့ http://localhost ကိုသွားြ က ည် လိ့က်ုပါ ။အော က် ပါ အတိ င်ုးြ မင် ရရင် တော့ အော င်ြ မင် သွား လိ ပေါ့ု။့ 
အခု အချ န်ိမှာကျ န်ွှတောတိ့်ုjoomla နဲ အစြ့  ပု ဖိြ့ုဖစ် ပါ တ ယ် ။
joomla ကိ ဒေါုင်းလု ပ် မဆွခင်ဲမြှာ ပင် ဆင် စရာ တ စ် ချို့  ကိ အရင်ုလု ပ် သ င် ပါ့တယ်။ ၁။ပထ မဆံးjoomla အတွုက် folder တစ် ခု ဆောက်ရပါ မယ် ။XAMPP ကိကျုန်ွှတောတိ့်ုInstall လု ပ် ထားတဲ နေရာ့  ကိ သွုားလိ က်ုပါ ။default အနေနဲ့  ဆိ ရင်ုတော့ C:\_XAMPP ပဲြ ဖစ် မှာပါ ။ ၂။htdocs ဆိ တဲု့ folder လေးကိ တွေုမှ့ာပါ ။ဖွ င် လိ့က်ုပါ ။
၃။htdocs ထဲ ကိုclick နှ ပ်ြိ ပီးဝင်ြ ပီးရင် အဲ ဒီ မှာright click နှ ပ်ြိ ပီးnew folder တ စ် ခု ဆောက် လိ က်ုပါ ။ြ ပီးရင် အဲ ဒီ new folder ကိုjoomla ဆြိုပီးတော့ rename လုပ် လိ က်ုပါ ။
၄။အခု အချ န်ိမှာhttp://www.joomla.org ကိသွုာြး ပီးတော့ joomla latest version ကိ ဒေါုင်းလု ပ် ဆွ နိဲင်ုပါြ ပီ ။version 1.5.xxြ ဖစ် ပါ လိ မ် မယ့် ။ကျ န်ွှတော် အခု ရေး နေတဲ အချ့  န်ိမှာတော့ နော က် ဆံုး က Joomla_1.5.8-StableFull_Package.zip ပါ ။size က တော့6MB နီးပါးလောက် ရှ ပိါတယ် ။
၅။ဒေါ င်းလု ပ် ဆွြဲပီးရင် တော့ အဲ ဒီ zip ဖိ င်ုပေါ် မှာright click နှ ပ်ြိ ပီးextract to Joomla_1.5.8-Stable-Full_Package/ ဆိ တာုကိ ရွေုး ပေး လိ က်ုပါ ။
၆။extract လုပ်ြ ပီးသွား ရင် ရလာတဲ့ Joomla_1.5.8-Stable-Full_Package ဆိတဲု့ folder ကို click နှ ပ်ြိ ပီးဝင် လိ က်ုပါ ။အထဲမှာရှ တဲိ့file တွေ folder တွေအား လံုး ကိုctrl+A နှ ပ်ိctrl+c နှ ပ်ြိ ပီးcopy လုပ် ထားပါ ။ြ ပီးရင် အထက်မှာကျ န်ွှတော် တိ ဆောက့်ုထား ခဲ တဲ့့  C:\_xampp\_htdocs\_joomla အော က် ကိ သွုားြ ပီး
တော့ ctrl+v နဲ့  paste လုပ် လိ က်ုပါ ။အခု အချ န်ိမှာကျ န်ွှတောတိ့်ုjoomla ကို setup လုပ် ဖိ အတွု့က် အဆ င် သ င်ြ့ဖစ် နေပါြ ပီ ။ Joomla ကို install လုပ် တောမယ့် ။
joomla ကိုinstall လု ပ် ရတာဟာအရမ်းကိ လွုယ် ကူ ပါ တ ယ် ။
၁။အရင် ဆံးhttp://localhost/joomla ကို သွုားလိ က်ုပါ ။အောက် ပါ အတိင်ုး တွေရပါ့  မယ် ။
၂။step1 ပေါ အခု့  က … language ကိရွေုးြ ပီးတော့ ညာ ဘက် အပေါ် နား က next ဆိတာုလေးကိ နှုပ်ိပေး ပါ ။
၃။step2မှာတော့ ဘာ မှ မလု ပ် ပဲ next ကိပဲုနှ ပ်ိပေး ပါ ။step3မှာတော့ လိ င်ုစင် တွေကိ ဖတ်ုပေါ့  ..ြ ပီးရင် next ပဲ နှ ပ်ိပါ ။ ၄။step4database configuration မှာတော့ အော က် မှာကျ န်ွှတြော်ဖည်ထာ့းသ လိ ( database type မှုာmysql, host name မှာlocalhost, username နေရာမှာroot, password မှာဘာမှ မထ ည် ဘူ့း , database name မှာတော့ joomla) လိက်ြု ဖည်ြ့ပီးတော့ next ကိ နှုပ်ိပါ ။
၅။step5မှာလ ည်းဘာမှ လု ပ် စရာ မလိဘဲုnext ပဲ နှ ပ်ိပါ ။
၆။step6Main Configuration မှာတော့ကိ ယ်ုပေး ချ င် တဲ့  website name ရယ် email လိပ် စာရယ် joomla အတွက် admin password ရယ်ကိြုဖည်ပေ့းပါ ။
install sample data ဆိတာကို နှ ပ်ိရင် တော့ သူ က sample တွေထ ည် ပေ့းပါ လိ မ် မယ့် ။မနှ ပ်ိရင် တော့
ဘာမှ မထ ည် ပေ့းပါ ဘူး.. ကျ န်ွှတော် အခု တော့
မနှ ပ်ိတော့ ဘဲ နဲ့  next ကိပဲုနှ ပ်ိပါ မယ်။box လေး တစ် ခု ပေါ် လာ ရင် Ok သာပေး လိ က်ုပါ ။
၇။step7finish ဆိ တဲုအဆင့်  ကိ့ရောက်ုသွား ပါြ ပီ ။သ င် ရဲ့username က တော့ adminြ ဖစ်ြ ပီးတော့ password ကတော့ စောစောကသ င်ပေး ထားတဲ့  ဟာပါ ။
အနီြ ကီးနဲ ရေ့း  ထားတဲ့ PLEASE REMEMBER TO COMPLETELY REMOVE THE INSTALLATION DIRECTORY .
ဆိ တာုကိ တောု တွေ့  မှ့ာပါ ။
ဖျ က်ြ ပစ် ဖိ အတွ့ုက် C:\_xampp\_htdocs\_joomla ရဲ့  အော က် ကိ သွုားြ ပီးအဲ ဒီ မှာတွေတဲ့့  installation ဆိတဲု့ 1.7 MB
လောက် ရှ တဲိ့ folder ကို အား ရပါးရshift+del သာလု ပ် ပစ် လိ က်ုပါ ။ြ ပီးရင် တော့ step7နေရာ ကိြုပန် သွားြ ပီးတော့ ညာဘက်အပေါ် နား က site ဆိတာလေုး ပေါ် မှာနှ ပ်ိလိ က်ုရင် သ င် ရဲ့ဘာမှ မရေး ရသေးတဲ့  website ကိတွေု့  ရြ ပီြ ဖစ် ပါ တယ်။
သင် ရဲ့website လိပ် စာကတော့ http://localhost/joomla/ြ ဖစ်ြ ပီးတော့ admin လိ ပ် စာ က တော့ http://localhost/joomla/administrator/ ပဲြ ဖစ် ပါ တ ယ် ။
အခု အချ န်ိမှာသ င် အနေနဲ့ administrator ထဲဝင်ြ ပီးတော့ စိ တ်ြ ကိုက် website တ စ် ခု ကိုအင် တာ နတ် မလိဘဲုနဲ့  local
host မှာဘဲ ဖန် တီးနိ င်ြု ပီ စမ်းသ ပ် နိ င်ြု ပီြ ဖစ် ပါ တယ် ။
ကျ န်ွှတောအ်ြကံ ပေး ချ င် တာကတော့ အခု သ င် install လုပ် ထားတဲ့  XAMPP ကြိုပန် uninstall လု ပ် လိ က်ြု ပီးတော့ နော က် တ စ် ခေါ က် installြ ပန် လု ပ် စေချ င် တာ ပါ ပဲ ။ဒါ ဆိ ရင်ုသ င် နောက် ခါအခု ဖတ်နေတဲ့ 
စာ အု ပ် ကိ လှုည်ြ့ကည်စရာတောင့်မလိတောု ပါ့  ဘူး… မယံရင်ုစမ်ြး က ည် ပါ။ဒီ့တ ခါ joomla ကိုြ ပန် install လုပ် ရင် တော့ install sample data ဆိတာုလေးကိ ပါုနှ ပ်ိလိ က်ုပေါ ။သ င့်  အတွ့ က် ကောင်းပါ လိ မ် မယ့် ။ ဘာတွေ ကွာသွား လဲ လေ့  လြာ ကည် လိ့က်ုပါ ။
အခု အချ န်ိမှာတော့ domain name နဲ့  web hosting နဲ ချ့  တ်ိဆက်ြ ပီးအသံြးု ပု ပံ နဲု့ မိ မိ ရဲ့ website မှာJoomla ကိုinstall လုပ် ပံ မျုားကိုရှ င်ြး ပသွား မြှာ ဖစ် ပါ တယ် ။domain name ဆိတာကတောု့ဥပမာwww.google.com,
www.mysteryzillion.org, www.moemyintshein.com စတာမျိုးတွေ ကိ ခေါ်ုပါ တ ယ် ။သင် လည်း သင် နာ့မည်နဲ့ 
အင် တာနက် ပေါ် မှာdomain name တ စ် ခု ရနိ င်ုပါ တ ယ် ။domain ဆိတာအမည်ု နာ မသ က်သက်ြ ဖစ်ြ ပီးတော့ အဲ ဒီ domain name ကို Mozila Firefox လိမျုိုးweb browser ရဲ့ address bar မှာရိ က်ြု ပီးခေါ် လိ က်ုရင် ပေါ် လာ တဲ့ 
စာ သားတွေ . ရု ပ် ပံ တွေု . video တွေအစရှ သြိဖင် ပါ့လာ တဲ့  စာ မျ က် နှာတ စ် ခု ချ င်းစီ ကိုweb page လုခေါ့်ြိ ပီးတော့ အဲ ဒီ
web page တွေနဲ့  အဲ ဒီ domain နှ စ် ခု ပေါ င်းကိ တောု့  website တစ် ခု လိ ခေါ့်ုပါ တယ်. ။အဲ ဒီ web page တစ် ခု ချ င်းဆီ ကိုweb ပေါ် မှာသိမ်းဆ ည်းထား ဖိ အတွ့ုက် web hosting လိအပ်ုပါ တယ် ။
အခု ကျ န်ွှတောတိ့်ုအရင် ဆံးdomain name တ စ်ုခု နဲ့  web hosting တစ် ခု ရှ ရပိါတော့ မယ် ။အရင် ဆံုး ကျ န်ွှတော် တိ့ုdomain name ကိစဉ်ုး စားရအောင် ။
အင် တာနတ် ပေါ် မှာdomain name ရောင်းတဲ နေရာမျ့ား စွာရှ ပိါတယ်။ဥပမာwww.godaddy.com ပေါ ။.com , .net့  .org , .info စသြ ဖင် ရှ့ပိါတယ်။ဥပမာကျ န်ွှတော် က www.moemyintshein.com ကို
လိ ချုင် တ ယ် ဆိ ရင်ုအဲ ဒါ ကိုတြ ခားသူ ကယူ ထားြ ပီးသားလားဆိ တာစစ်ုလိ ရပါ့ုတ ယ် . မယူထားသေးဘူးဆိ ရင်ုတော့
လွ ယ် ကူ စွာပဲ ပထ မတစ် နှ စ် စာအတွက် $10 လောက် နဲ့  ၀ယ်ယူ နိ င်ုပါ တယ် ။တြ ခားသူ က ယူ ထာြး ပီးသာြး ဖစ် ရင် လည်း .. တစ် ဆ င်ြ့ပန် ၀ယ်လိ ရပါ့ုတယ် ။သူကရော င်းရင် ပေါ့  ဈေးက တော့ တောတော် မ်ျား ပါ လိ မ် မယ့်  ။ကျ န်ွှတော် အခု တော့
အလ ကားရတဲ့ co.cc ဒိ မိုန်းနဲ့  အရင် ရှ င်ြး ပပါ မယ်။သူ က တော့ ပထ မတစ် နှ စ် ကိုfree ပေးြ ပီးတော့ နောက်နှ စ် တွေ ထ ပ် renew လု ပ် ချ င် ရင် တော့ ပိ က်ုပိ က်ုပေး ရပါ မယ် ။အခု co.cc ဒိ မိုန်းတစ် ခု ကိ ကျုန်ွှတော် တိ့ုregister လု ပ် ရအောင် သူ ရဲ့့  websiteြ ဖစ် တဲ့  www.co.cc ကိ သွုား ပါ ။
ကိ ယ်ုလိ ချုင် တဲ့  domain name ကိစစ်ြု က ည် ပါ့။ကျ န်ွှတော် www.moemyints.co.cc ကိုစစ်ြ ကည်ပါ့မယ်။ အော က် ကပံ ပေါ်ုလာ ပါ တ ယ် ။availableြ ဖစ် ပါ တ ယ် တဲ ဗျ့ာ။တြ ခား သူ တွေ မယူထားသေး ပါ ဘူးပေါ ။့ 
အဲ ဒါြေ ကာင့်ကျ န်ွှတော် continue to registration လိ နှ့ုပ်ိပါ တ ယ် ။မိ တ် ဆွေတိ့ုစစ် လိ က်ုတဲ့  လိ ချုင် တဲ့  domain တွေ လ ည်းရပါ စေဗျား …
ဟောအော က် ကပံ ပေါ်ုလာ ပါ တယ်။အကောင် မရှ့တဲိ့ အတွ က် ဘာမှ မြ ဖည် ဘဲ့နဲ့  အော က် နား လေးက create an account now ဆိတာုလေး ကိ ပဲုနှ ပ်ိလိ က်ုမယ်။
အခု ရော က် လာ မယ်စာမျ့  က် နှာမှာတော့ first name, last name , email address မှ စလို့နော က် ဆံုး အထိ မှ န် မှ န် က န် ကန် လေြး ဖည် ပေ့းလိ က်ုပါ ။
I accept the terms of service ဆိ တဲု့ check box လေးမှာအမှ န် လေြး ခစ် ပေးြ ပီးတော့ create an account now ကိ နှုပ်ိလိ က်ုပါ ။
အော က် ကပံ လေုးဆီ ကိ ရောုက် လာ ပါြ ပီ ။48 နာ ရီ အတွ င်းမှာset up မလုပ် ရင် တဲ့  registration ကို cancel လု ပ် ပါ မယ်တဲ့  ။ဒါ ပေမယ့်  ခဏ ထား ခဲ့ 
လိ က်ုပါ ဦးအခု တော့ set up မလုပ် ပါ နဲ ဦ့း။48 နာ ရီ မြ ပည်ခင့်တော့ ဒီ ကိြုပန် လာ မယ်လေ ။အခု တော့ hosting ဘက်ကိ ခဏ သွုားြ ကရအောင် ။
web hosting အကောင် ဟာ့လ ည်းပဲ domain name လိမျုိုး ပဲ ရော င်းတာပါ ။အခု တော့ ကျ န်ွှတော် တိ့ုfree
လည်း ရတ ယ် .. အလု ပ် လည်းြ ဖစ် မယ့် hosting တ စ် ခုြ ဖစ် တဲ့  www.frehostia.com ကိ သွုာြး က ရအောင် ပါ ။
ရွေးချ ယ် စရာ အမျိုးအစားplan တွေက တောအမျ့ား သားဒါ ပေမယ့် ရှေ့  ဆံုး က free ဆိတဲု့ chocolate လေး ကိ ပဲုနှ ပ်ြိ ပီးရွေးလိ က်ုတာ ပေါ ။့ 
အခု ရော က် လာ တဲ နေရာမှ့ာtake it now ဆိတာုကိ တွေု မှ့ာပါ ။နှ ပ်ိလိ က်ုပါ ။ နော က် တ စ် မျ က် နှာမှာတော့ အော က် ပါ အတိင်ုး တွေရပါ့  မယ်။
addadomain name to host ဆိတဲုနေရာမှ့ာရွေးချ ယ် စရာသံုး ခု ရှ ပိါတယ် ။အလ ယ် က use my existing domain ဆိ တာုကိ ရွေုးြ ပီးတော့ ခု နက co.cc မှာကျ န်ွှတော် တိ့ုregister လု ပ် ထား တဲ့  domain name ကိ ရိုက်ုထ ည် လု့က်ိပါ ။
ကျ န်ွှတောက တော့်  ကျ န်ွှတော် လု ပ် ထား တဲ့  moemyints.co.cc ကိ ရိုက်ုထ ည် လိ့က်ုတာအမှ န် လေးပေါ် လြာ ပီးတော့ လက်ခံြေ ကာင်ြး ပပါ တယ်။ြ ပီးရင် တော့ account owner details လေးကိ သေချြုာ ဖည်ပေ့းလိ က်ုပါ ။ လက်ခံ နိ င်ုတ ယ် ဆိ ရင်ုအမှ န် လေးတွေဘေး မှာပေါ် လာ ပါ မယ်။ြ ပီးရင် တော့ verification code လေး ကိ မမှုား အောင် ရိ က်ုထည်ြ့ပီးတော့ continue ကိနှုပ်ိလိ က်ြု က စိ ။့ု
ြ ပီးရင် please waitaminute ဆိြုပီးပေါ် ပါ မယ်။view your order detail တွေ လဲ မြ ကည်တော့ ပဲ့  နဲ့  ဘေးနား က အမှား ကိ ပဲုနှ ပ်ိလိုက် ပါ။နောက် ဆံုး မှာတော့
အော က် ဖောြ်ပပါ စာ မျ က် နှာကိ ရောက်ုလာ ပါ လိ မ် မယ့် ။
သင် ရဲ့အကောင့်နာ မည်ကိြေုပာပါ လိ မ် မယ့် ကျ န်ွှတောရဲ့့် အကောင် က တော့  ဒီ မှာmmkcon ပါ တဲ ။password့ 
တိ ဘာ့ုတိ့ုကိုအရှေ့  မှာကျ န်ွှတောတိ့်ြု ဖည် ပေ့းထား တဲ့  email လိပ် စာထဲ ကိုမိ နစ် သံုး ဆ ယ် အတွင်းပိ ပေ့းုပါ မယ်တဲ ။့  ကျ န်ွှတော့်inbox ထဲကိ မေုးရောက် လာပါ တယ် ။
ရော က် လာြ ပီ ဆိ ရင်ုတော့ log in to control panelြ ဖစ်ြ ဖစ် control panel လိပ် စာ
http://cp.freehostia.com/members/ ကြိုဖစ်ြ ဖစ် နှ ပ်ြိ ပီးအောက်ပါ အတိင်ုး ပေါ် လာပါ မယ် ။login ၀င် လိ က်ုပါ ။
email ထဲ မှာdomain ရဲ့ DNS ကိုြေ ပာင်းခိ င်ုး တာတွေ့ ရပါ မယ်။မြ ကာ ခင်ြေ ပာင်းပါ မယ်။ အခု log in ၀င် လိ က်ုတဲ့  အခါ အော က် ပါ ပံ စုံအတိ င်ုး တွေ့  ရမြှာ ဖစ် ပါ တ ယ် ။
အခု ကျ န်ွှတောတိ့်ုdomain manager ထဲကိ ၀င်ုပါ မယ် ။၀င် လိ က်ုတဲ့  အခါ အောက် ပါ ပံ ကိုရောက်ုလာပါ မယ် ။
ရော က် လာ ရင် Hosted ဆိ တဲုအထဲ့  ကိုထပ်ြ ပီးတော့ ၀င် ပါ မယ် ။အော က် ပါ အတိ င်ုး တွေ့  ရပါ မယ် ။
ကျ န်ွှတောအရှေ့် မှာတု န်းက moemyints.co.cc ကို existing domain အနေနဲ့  ရွေးခဲ တဲ့  အတွ့ က်
ရော က် နှ င် နေတြာ့ဖစ် ပါ တယ် ။ဒါ ပေမယ့် domain ကို DNS set up မလု ပ် ရသေး တဲ အတွ့ က် DNS နေရာမှာအမှားြ ပနေပါ တယ် ။DNS set up လုပ်ြ ပီးလိ့ုhosting နဲ့  domain ချ တ်ိလိြ့ုပီြး ပီ ဆိ ရင်ုအမှ န် လေးြ ပမြှာ ဖစ် ပါ တယ် ။ ဒါြေ ကာင့်အခု domain moemyints.co.cc ကို set up လုပ် ဖိ အတွု့က် co.cc ကိြုပန် သွား ရအော င် ။
http://www.co.cc ကိ သွုား လိ က်ုပါ ။returning user sign in here ဆိတဲုနေရာ့  ကိ နှုပ်ြိ ပီးsign in ၀င် လိ က်ုပါ ။
အော က် ပါ နေရာ ကိ တ န်ုး ရောက် လာပါ လိ မ် မယ့် မရောက် ခဲ ရင့်  လည်းmanage domain ကိ နှုပ်ြိ ပီးဝင် လိ ရပါ့ုတယ် ။
moemyints.co.cc ရဲ့ set up ဆိ တာုကိ နှုပ်ိလိ က်ုပါ ။အောက် ပါ အတိင်ုး ရွေးချ ယ် စရာ သံုး မျိုးတွေ့ ရပါ မယ်။
ကျ န်ွှတောတ်ိက အခု့ုDNS manage လုပ် မြှာ ဖစ် တဲ့  အတွက် နံ ပါ တ် ၁။ကိပဲုရွေးလိ က်ုပါ မယ် ။
အော က် ဖော်ြ ပပါ အတိင်ုးြ ဖစ် သွား ပါ မယ်။အဲ ဒီ အခါ မှာname server 1 နဲ့ 2နဲ မှ့ာကျ န်ွှတောတိ့်ုဆီ ကိုရော က် လာ တဲ့  email ထဲ မှာပါ တဲ အတိ့ င်ုးDNS လိ ပ် စာ တွေကိ ထည်ု ပေ့းလိ က်ုပါ တ ယ် ။
ထည်ပေြး့ ပီးရင် တော့ set up ကိ နှုပ်ိပါ မယ်။your changes has been submitted ပေါ် လာတော့ ok ပေါ ။့  set up လုပ်ြ ပီးသား ပံ စုံလေးပေါ် လာပါြ ပီ ။
name server တွေရဲ့  အြေ ပာင်းအလဲဟာ48 နာရီ အထိြ ကာ နိ င်ုပါ တ ယ် တဲ ။့ 
အခု အချ န်ိဟာည ဆိ ရင်ုတော့ သ င် အိ ပ် လိ က်ုပါ တော့ သူ ကိ့  အချုန်ိပေး လိ က်ုပါ ။နေ့ ခင်းဆိ ရင်ုတော့ တစ် ခု ခု စား။ တစ် ခု ခု သောက် ပေါ ဗျ့ာ။တ ညတော့ သင် စော င် ရဦ့း မယ်ထင် ပါ တ ယ် .. ဒါ ပေမယ့် တ စ် ခါ တလေြ ကတော့ တစ် နာရီ လောက် နဲ ရတာ့ မျိုးကိ လည်ုးကျ န်ွှတြော်ကုံဖူးတယ်ဗျ …
ကျ န်ွှတောလ ည်းအခု အိ ပ် တော့ မယ် ဗျား … မနက်ဖန် မှ ဆ က် မယ် ။ မနက် ဖန် ရော က်ြ ပီ ဗျို့ ကျွှန် တော် freehostia ရဲ့ control panel ထဲကိ ၀င်ုလိ က်ြု ပီးတော့ domain mangerြ ပီးတော့ hosted ဆိြုပီးအဆ င် ဆ င့်ဝင့်လိ က်ြု ပီ ဗျာ။ ဟောတွေ့ ပါြ ပီ အော က် မှာ…
မနေ့ တု န်းက အမှားြ ဖစ် နေတဲ့ DNS နေရာမှာအခု တော့ အမှ န် လေး နဲ့  ၀မ်းသာစရာပေါ ဗျ့ာ။အား လံုး လည်း
အမှ န်ြ ဖစ်ြ က မယ်လိ့ုယံြုက ည် ပါ တ ယ် ဗျား ။ကဲအခု domain name co.cc နဲ့  hosting နဲ ချ့  တ်ိလိ အောင့်ြု မင် သွားြ ပီ ဆိ တောု့  joomla ကို install လုပ်ြ ကရအောင် ဗျား ။အရမ်းမတွေးပါ နဲ့  အရမ်းလွ ယ် ကူ တဲ့  နည်းလ မ်းတွေကိ ပဲုအသံုးြ ပု သွား မှာပါ ။ဒါ ပေမယ့် joomla မသွ င်းခင် မှာdatabase
တစ် ခု ဆောက် ဖိ လိ့ုအပ်ုပါ တယ်။ ဒါြေ ကာင့်database ဆောက် ဖိ အတွ့ုက် http://cp.freehostia.com/members ကိ သွုာြး ပီးတော့ mysql database ဆိတဲုအထဲ့  ကိ ၀င်ုလိ က်ုပါ ။
ကဲ data base ဆောက်မယ် ဗျာ။ကျ န်ွှတော် က တော့ mmkcon_joomla လိ့ုdatabase name ထား လိုက် တ ယ် ။
data base name နဲ့  database user name က အတူတူ ပါ ပဲ ။password ပေး လိ က်ြု ပီးတော့ add sql database
ကိ နှုပ်ိလိ က်ုပါ တယ် ။video tutorials တို့help တိ ကိ့ုပြါု က ည် ချ့င် ရင်ြ က ည် ပေါ့ဗျ့ာ။my sql database has been added successfully လု ပေါ့်ိလာြ ပီးတော့mmkcon_joomla ဆိတဲုdatabase တစ့်  ခု ကိ တွေု့  ပါ လိ မ် မယ့်  ။ အခု freehostia control panel ရဲ့ top menu က webtools ဆိ တာလေုးကိ နှုပ်ိလိ က်ုပါ
အော က် မှာပေါ် လာ တဲ အထဲ့  က အပေါ် ဆံုး ကပဲ elefante free scripts ဆိတာလေုး ကိ ၀င်ုလိ က်ုပါ ။ဒါ မှ မဟုတ် ရင် လည်းcontrol panel ရဲ့ homeြ ဖစ် တဲ့  http://cp.freehostia.com/members ကိပဲုသွားြ ပီးတောelefante free scripts ထဲ ကိ ၀င်ုလိ က်ုပေါ ။့ 
၀င်ြ ပီးရင် အော က် က ပံ ကိုရောုက် လာ ပါ မယ်။
ကျ န်ွှတောတ်ိအခု့ုjoomla သွင်းချ င် တြာ ဖစ် တဲ အတွ့ က် joomla 1.5.7 ဆိတာုကိ နှုပ်ိလု က်ိပါ မယ်။
အခု အတိ င်ုး ပေါ် လာ တဲ့  အခါinstall joomla 1.5.7 ကိနှုပ်ိပါ မယ်။
အခု အဆင် မှ့ာstep 1 database ကိရွေုး ပေး ပါ ။ြ ပီးရင် step2ကြိုဖည်လိ့က်ုပါdomain နေရာမှာကျ န်ွှတောက်
moemyints.co.cc ကိရွေုး ပေးြ ပီးတော့ path ကို / ပဲ ပေး ထား ပါ တယ်ဒါ မှ ပဲ moemyints.co.cc မှာသွ င်းမြှာ ဖစ် ပါ တယ်။ admin user နဲ့  password တိ့ုemail တို့site name တို့ကိ စိုတ်ြ ကိုက် ပေးြ ပီးတဲ အခါ့  မှာတော့ step3install လု ပ် လိ က်ုပါ တယ် ။please wait ဆိြုပီးပေါ် နေပါ လိ မ် မယ့် ။ခဏ အြ ကာမှာတော့ congratulations
ဆိြုပီးတောပေါ့်  လာ ပါ မယ်။အခု သ င် ရဲ့website ကြိုက ည် လိ့ရပါ့ြု ပီ ။ကျ န်ွှတော့ website က တော့
www.moemyints.co.ccြ ဖစ်ြ ပီးတော့ joomla admin နေရာကတော့ www.moemyints.co.cc/administratorြ ဖစ် ပါ တ ယ် ။အောက် က ပံ လေုး တွေအတိ င်ုး ပေါ ။့ 
ဒါ က တော့ သ င် ရဲ့website ပေါ့  ဗျာ။သူက sample contents တွေ ပါ ထ ည် ထာ့း ပေး ပါ တယ်ကျ န်ွှတောတိ့်ုlocalhost မှာလု ပ် တု န်းကတော့ sample data တွေမထည်တာ့ကိ မှုတ် မိ အံုး မှာပါ ။
၀င် လိ က်ုရင် တော့ အော က် က အတိင်ုး ပေါ ။့ 
အခု ကျ န်ွှတော် local မှာရောweb ပေါ် မှာပါ အြေ ခခံ တွေကိြုပခဲြ့  ပီးပါြ ပီ ။joomla ကိ အသုံုးြ ပု တဲ အပိ့  င်ုးwebsite ကို
maintain လုပ် တဲ အပိ့  င်ုး တွေကိ တောု့ကျ န်ွှတောဒ်ီအြေ ခခံ စာအု ပ် လေးမှာမရေး ပေး တော့ ပါ ဘူး.. နောက် ထ ပ် တ စ် အု ပ် ရေးြ ဖစ် ခဲ ရင့်  တော့ ပါ လာ ပါ လိ မ် မယ့်  ။ ရှ င်းလ င်းချ က် ။။
ကျ န်ွှတောအထ က်ပါ tutorial မှာco.cc နဲ့  freehostia.com တိ ကိ့ုု အသံြးု ပု ခဲ ပါ့  တယ် ။
အား လံုး အဆင်ြေ ပမယ် လိ ယူ့ုဆလိပါ့ုနှ စ် ခု စလံုး က free ရလိ ပါ့ု။co.cc က တော့ တစ် နှ စ် ပဲ free ပေး ပါ တော့ တ ယ် ။
သင် ကိ ယ်ုပိ င်ုdomain name(.com,.net,.info ..etc) နဲ့  web hosting တိကိ့ုဝယ်ြု ပီးသံုး တဲ့  အခါ မှာအထ က်က co.cc နဲ့  freehostia.com တိ နဲ့ု့ တောတ စ့်  ပံ စုံထည်းမြ ဖစ် နိ င်ုပါ ။သိသောု့လ ည်းသ ဘောတ ရားကတော့ အတူတူ ပါ ပဲ ..ြ ပီးတော့ ဆက် လက်လေ့  လာသွားပါ လု လည့်ိးတိ က်ုတွ န်းလိ က်ုပါ တယ်။။
google apps နှ င် domain name ချ့တ်ိဆက်ြ ခင်းအခု ကျ န်ွှတော် နောက် ပိ င်ုး မှာလူ သံုး များ လာတဲ့  google apps ကိသုံြးု ပီးကျ န်ွှတော် တိ ရဲ့ု့domain name တွေနဲ့ 
ချ တ်ိဆ က်ြ ပီးတော့ email , gtalk သံုးပံ တွေု ကိြုက ည်ြ့ကပါ မယ်။လူ အများ လွ ယ် လွ ယ် ကူ ကူ သိ နိ င်ုစေဖိ ရည့်ုရွ ယ် ပါ တ ယ် ။ အရင် ဆံးhttp://www.google.com/apps/intl/en/group/index.html ကိုသွုားလိ က်ုပါ ။
get started ပေါ ။အော့  က် ပံ ကိုရောက်ုလာ မယ် ။
အပေါ် က administrator ကိရွေုး လိ က်ုမယ်။ကျ န်ွှတောတ်ိရဲ့ု့domain name ကိရိုက်ုထည် လိ့က်ုမယ်။ ကျ န်ွှတော့်domain က တော့ www.moemyints.co.cc ပေါ့ြ ပီးရင် ထပ်ြ ပီးget started လု ပ် ပါ မယ်။ 27
step2 တွေstep3 တွေ ကိ တောု့  screen shots တွေမထ ည် တော့ ပါ့  ဘူး.. ပံ မှုန် အတိင်ုလေး ပဲြ ဖည် သွ့ားလိ က်ုပါ
မှ န် အော င် နဲ့  password တွေ တော့ မမေ့ ပါ စေနဲ ဗျ့ာ။I accept continue with set up ဆိ တာကိုနှုပ်ြိ ပီးတဲ့  အချ န်ိမှာအော က် ပါ နေရာ ကိ ရောက်ုလာပါ လိ မ် မယ့် ။
အကုန် လံးnot active တွေုချ ည်ြး ဖစ် နေတာတွေပါ့  မယ်။verify domain ownership လု ပ် ပေး ရဦးမယ်လေ
အပေါ် နား လေး မှာပါ … နှ ပ်ိလိ က်ုပါ ။choose verification method ဆြိုပီးရွေးစရာနှ စ် ခု တွေပါ့  မယ်။အပေါ် က upload an html file ကိပဲုရွေးလိ က်ုတာပေါ့  ။
29 verify လိ မနှ့ုပ်ိနဲ ဦ့းနော် သူ ခိ င်ုး တဲ အတိ့ င်ုး အရင် လု ပ် လိ က်ုဦးမယ်လေ ။windows key ရယ်r ရယ်နှ ပ်ြိ ပီးတြော့  ဖစ်ြ ဖစ် notepad ကိခေါ်ြု ပီးတော့ သူြေ ပာ တဲ အတိ့  င်ုးgoogle32………(တစ် ယောက် နဲ့  တစ် ယောက် တူ မယ်မထင် ) အဲ ဒီ text
လေး ကိုcopy paste လု ပ် လိ က်ြု ပီးတော့ သူ ခိ င်ုး သလိgooglehostedservice.html ဆြိုပီးတော့ desktop မြှာ ဖစ်ြ ဖစ် save လုပ် လိ က်ုပေါ ဗျ့ာ။ကဲ… upload လုပ် ရမယ်တဲ့  အခု freehostia ရဲ့ control panel ထဲကိြုပန်ြ ပီးချ တက်ြီ က စိ ။့ုcontrol panel ထဲကိ ၀င်ြု ပီးတော့ file manager ထဲကိုထ ပ် ၀င် လိ က်ုပါ ။
file manager ထဲကိ ရောက်ုလာ ပါြ ပီ moemyints.co.cc ကိနှုပ်ိလိုက် ပါ မယ်။
အခု နော က် တ စ် မျ က် နှာမှာတော့ သူ ခိ င်ုး တဲ အတိ့ င်ုuးpload တင် ရပါ မယ် browse လု ပ်ြ ပီးgooglehostedservice.html ကိ ရြှုာ ပီးopen လိ က်ုပါ ။ြ ပီးရင် တော့ upload file(s) ကိ နှုပ်ိလု က်ိပါ ။
အခု လိ ပေါ်ုပါ မယ် ok ကိ နှုပ်ိလိ က်ုတဲ အခါကျ့  န်ွှတောတိ့်ုupload တ င် လိ က်ုတဲ့  file လေးဟာရောက် သွားြ ပီ ဆိ တာုကိုတွေ့  ရမြှာ ဖစ် ပါ တ ယ် ။
အခု ကျ န်ွှတောတိ့်ုသူ ခိ င်ုး သလိပဲုသေ ချာသွား အော င် လိ့ုhttp://www.moemyints.co.cc/googlehostedservice.html ကိ သွုာြး က ည် ရအောင့်။သင့်domain name က တော့ ကျ န်ွှတော့်domain name နဲ မတူ့ ဘူးနော …်
မျှော် လ င် ထာ့းသ လိ ပဲုပေါ် လာ ပါ တယ်။ အခု verify လု ပ် လိ ရြ့ုပီ ပေါ ဗျ့ာ။ ဒါြေ ကာင့်google apps ထဲကိြုပန် သွားြ ပီးတော့ verify ကိ နှုပ်ိလိ က်ုပါ တယ် ဗျား ။
အခု တော့ အော က် ပါ အတိုင်ြး ဖစ် သွား ပါြ ပီ ။
verify မလု ပ် ခင် က not activeြ ဖစ် နေတဲနေရာတွေ့  မှာupdating ဆိြုပီးတော့ြေ ပာင်းကု န် ပါြ ပီ ။
domain ownership ကို checking လုပ် နေပါ တ ယ် တဲ့  48 နာရီ လောက်ြ ကာရင်ြ ကာမယ် တဲ ဗျ့ာ။ စော င်ြ့က တာပေါ့  
စော င် ရင့်း နဲ့  service settings ဘေး နားက add more services ဆိတာကိုနှုပ်ိရအော င် email တို့chatting တိ့ုက လက်ရှိservice တွေ မှာမတွေ ဘူ့းလေ calendar တိ့ုsites တိ့ုdocs တိပဲ့ုတွေနေတ ယ့်  ။နှ ပ်ိလိ က်ုတော့ ဒီ လိ ပေါ်ုလာတယ်ဗျာ။
ကဲ email နဲ့  chat နဲ့  service နှ စ် ခု လံုး ကိုadd it now လု ပ် လိ က်ြု ပီ ဗျာ။
ကျ န်ွှတောထ င်တော့ မထ င် ဘူးcalendar ရယ် docs ရယ်sites ရယ်က active တောင်ြ ဖစ် သွားြ ပီ ၅
မိ နစ် လောက် ပဲ ရှ သေိး တ ယ် email က တော့ not active chat က လ ည်uးpdating တဲ။့  email ကိုactiveြ ဖစ် အောင် လု ပ် ဖိ အတွု့က် activate email ကိ နှုပ်ိလိ က်ြု ကစိ ဗျ့ုာ။ အဲ ဒီ မှာပေါ် လာတွေ တွေ ဖတ်ြ ကည်ပေါ့ဗျ့ာဖတ် ချ င် ရင် ပေါ ။့  အော က် ကနေရာ လေးကိ ရောက်ုလာမယ် ။
နှ စ် ခု စလံုးကိ မနှုပ်ိနဲ ဦ့း။သူ ခိ င်ုး သလိကျုန်ွှတော် တိ့ုလု ပ် ပေး ရဦးမယ် ။အခု freehostia control panel ကိ သွုားြ ကဦးစိ ။့ု
အဲ ဒီ မှာcustom DNS Records ထဲကု ၀င်ိလိ က်ုမယ် ။ ဒါ က ကျ န်ွှတောဆီ့်က မူ ရင်းပံ စုံပေါ့ 
အဲ ဒီ မှာကျ န်ွှတော်4moemyints.co.cc ဘေး က MX ထဲက mbox.freehostia.com နေရာမှာသူခိ င်ုး တဲ အတိ့  င်ုး ASPMX.L.GOOGLE.COM ဆြိုပီးတော့ြေ ပာ င်းလိ က်ုမယ်ကျ န် တာက တော့ သူ ဟာသူ့  နေပါ စေပေါ ။့  ဟော…အောက်ကအတိင်ုးြ ဖစ် သွားြ ပီ ။
အခု google apps ထဲကိြုပန် သွားြ ပီးတော့ I have completed these steps ကို သွား နှ ပ်ိလိ ရပါ့ြု ပီ ။ အခု အချ န်ိမှာတော့ အောက် က ပံ အတိုင်ုးemail ရောchat ရောနှ စ် ခု စလံုး က updating အဆ င် ကိ့ရောက်ုသွား ပါြ ပီ ခင် ဗျာ။
အခု တော့ တ က ယ် တ ညစော င် ရပါ့လိ မ် မယ့်  ။နောက်နေ့ မနက်ြ က မှြ ပန်ြ ကည်ြ့ကတာ ပေါ ဗျ့ာ။ အခု နော က် တ စ် နေ့ ရောက် သွား ပါြ ပီ ခင် ဗျာ။ြ မန် တ ယ် နော်:D
http://www.google.com/a/moemyints.co.cc ဆြိုပီးကျ န်ွှတော် ၀င် လိ က်ုပါ မယ်အကိတို့အမတိက တော့ုmoemyints.co.cc နေရာမှာတြ ခား တစ် ခုြ ဖစ် မှာပေါ နော့်  …
၀င် လိ က်ုပါြ ပီ . ..အော က် ပံ ကြိုကည် ပါ့။
မနေ့ တု န်းက updating လု ပ် နေတဲ့  email ရောchat ရောactiveြ ဖစ် သွား ပါြ ပီ ခင် ဗျာ။အောင်ြ မင် သွားြ ပီ ပေါ ဗျ့ာ. ကျ န်ွှတောတ်ိစမ့်ုးြ ကည်ြ့ကရအော င် ။inbox ဆိတာုလေးကိ တွေုတယ့်  နော်အဲ ဒီ ကိ ၀င်ုလိ က်ုမယ်ဗျား ..
ြ ပီးတော့ gtalk ထဲကိ လည်ုး ၀င် လိ က်ုပါ မယ်။username နေရာ မှ အြ ပည် အစံ့ရိုက်ုထ ည် ရပါ့မယ်။ဥပမာ moemyintshein@moemyints.co.cc ပေါ ။အောက့်  မှာsigning inြ ဖစ် နေပါြ ပီ ။
ကျ န်ွှတောအကော့်င် နှ့စ် ခု နဲ အရင့်  စမ်းတယ်eversimplex ဆိတဲုညီ့  တ စ် ယောက် ကိ လ ည်ုးadd လိ က်ြု ပီးတော့ စမ်းပါ တယ်ok ပါြ ပီ ။
inbox ထဲမှာလ ည်းအခု လိ ပေါု..့ 
မေး ပိ တာ့ုတိ့ုလက်ခံ တာ တိ ကိ့ုလည်ုး စမ်ြး ကည်ပါ့တယ်အား လံုး အဆ င်ြေ ပပါ တယ် … အခု အချ န်ိမှာတော့ အောင်ြ မင် စြွာ ပီးသွား ပါြ ပီ ခင် ဗျာ။
ကျ န်ွှတောဒ်ီစာအု ပ် လေး မှာဘာမှ မလုပ် တတ် သေး တဲ သူ့  တွေ အတွက် အဓိ က ရည်ရွ ယ်ြ ပီးတော့ ရေး သား ခဲ ပါ့  တ ယ် ။ သင် အတွ့ က် အနည်းငယ်မျှအကျိုးရှ လျှိ င် ပင် ကျ န်ွှပ် ရေး ရကျိုး နပ် ပါ သ ည် ။
အစကတော့ joomla ကိသုံြးု ပီးwebsite ရေး သား တာ တွေကိုအသေးစိ တ် ရေး ဖိ့ုစိ တ် ကူးနဲ ပါ့  ပဲ ။ဒါ ပေမယ့် စာရေး ရတာအစကတွေး ထားသလိမလွု ယ် ကူ တဲ အတွ့ က် ပထမဆံုးရေး သား တဲ့  tutorial ebook လ ည်ြး ဖစ် လိ့ု
ဒီ လောက် နဲ ပဲ့  ရပ် လိ က်ုရတာပါ ။ကျ န်ွှတော် သိ တာ တွေ ကိ သူုတပါးကိ ဆက်ု လ က် ဝေမျှချ င် ပါ သေးတယ်..
ကျ န်ွှတောဆက်ရေး ချ င် ပါ တယ်။ကျ န်ွှတော် အခု ရေး လိ က်ုတဲ့  ဒီ ebook ပိ စိ ကွေးသေးလေးပေါ် မှာဝေဖန် ပေးြ က ပါ .. ဖတ်ြ က တဲ သူ့  အယောက် တိ င်ုး ပေါ့  တ စ် ခု ခုြေ ပာ ပေးြ က ပါ လိ့ုတောင်းဆိ ပါုတ ယ် .. သ င် ရဲ့ဝေဖန် မှု က ကျ န်ွှတောနော်က် ထပ် ရေး ဖိ မရေ့းုဖိ အပေါ့်ုမှာအများြ ကီးအကျိုးသက်ရောက် ပါ လိ မ် မယ့် ။
မရှ င်းလ င်းတာ တွေ.. သိ ချ င် တာ တွေရှ ရင်ိလ ည်းမေးြ မန်းနိ င်ုပါ တယ်ခင် ဗျာ။ အော က် ပါ email နဲ့  website များ သိ ဆက့်ုသွ ယ် နိ င်ုပါ တယ် ။ email :
အား လံုး ကိ ကျေုး ဇူးတ င် ပါ တယ်။
1 1223344556677 8 899 10 10 11 11 webhostingအေ ကာင့်ဟာလည်းပဲ domainnameလိုမျိုးပဲရောင်းတာပါ။အခုတော့ကျွှန်တော်တို့ free လည်းရတ...